Waa Kuwee Tobanka Wadan Ee Laga Geysto Kufsiga Ugu Badan Caalamka, Miyey Somalia Ku Jirtaa? – Filimside.net
Kufsiga wuxuu noqday mid ku baaha dunida, waxaana lasoo sheegayaa in qaar ka mid ah wadamada ugu hormarsan dunida ay kaalmaha hore kaga jiraan wadamada ay dadkiisu ku kacaan falalka kufsi ee ugu badan marka lala barbardhigo caalamka intiisa kale.
Dalkeena Somaliya kama mid ahan dalalka kasoo muuqan doona liiskaan, balse waxaa qaaradda Africa marka la yiraahdo kasoo muuqday dalalka Ethiopia iyo South Africa, layaabka ugu weyn ayaana ah in liiskaan lagu arkay wadamada hormaray sida: France, Sweden, USA, UK iyo dalal kale.
Waa wax layaab ah in dunida maanta in daqiiqad walba caalamka uu kufsi ka dhaco kufsigaaso inta ugu badan loo geesto dumarka sababtoa ah Ragga la kufsada wey iska yar yihiin caalamka.
Dalalka hormarka isku sheega waa meelaha dunida ugu amaanka xun marba hadii kufisga ugu badan uu kadhaco halkaas waxaana ugu wacan nuurka islaamka oo halkaa ku yar halka dalkeena kufsi inkastoo uu kadhaco hadana uu ku yaryahay marka lala bar bardhigo wadamada kale.
Fadlan halkaan hoose kaga bogo 10-ka dal caalamka kufsiga ugu badan ka dhaco waxaana liiskan soo galayaan wadamo badan oo qaarkood ay macquul tahay inaad hader ku nooshahay.
Waxaa Aqrisay 1,627
Runta hadii laga hadli lahaa Somaliya 1 aad ayey gali laheyd